Nhau - Mutungamiri wekusimuka. yeEcology uye Nharaunda yeZhengzho yakaongorora hutongi hwakadzika hwezvakatipoteredza muFangming NewM
Zhengzhou Fangming Yakakwira Kutonhora Ceramic Nyowani Nyowani Co, Ltd. (Pano inonzi "Fangming NewM") yanga ichivandudza nekushandura nharaunda yekugadzira uye michina yekugadzira kweanoda kusvika makore matatu, uye yaisa akawanda epamberi ekuunganidza guruva-kuunganidza zvigadzirwa uye yakakwira-yekumanikidza yekumwaya michina uye iyo yekupedzisira-yakadzika emisi yekutarisa michina. Kuburikidza nemidziyo yekuongorora iyi, iro dhipatimendi rinogona kutarisa mamiriro akajeka ekugadzirwa kwemusangano munguva chaiyo. MunaNovember 2019, Fangming NewM yakave yakamisikidzwa nezve kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza zvakadzama kurapwa neDepart. yeEcology uye Nharaunda yeZhengzhou Guta.
Munguva yekupera kwegore rekare uye kutanga kwegore idzva, chirwere cheCOVID-19 chakaparadza Wuhan, Hubei neChina chose.Vanhu vese veChinese vakabatana semunhu mumwe kurwisa denda iri, kutangazve kugadzira uye kushanda. Chekupedzisira, pakupera kwaApril 2020, denda iri rave kungodzorwa uye hupfumi hwenyika hwave munzira kwayo. Ndichiri kurwisa madenda muna 2020, Fangming NewM yakagara ichingomira pakutora kuchengetedza kwezvakatipoteredza nekusimudzira basa rekuvandudza girini.
Pamasikati aApril 27th, 2020, mutungamiri weDhipatimendi. yeEcology uye Nharaunda yeZhengzhou Guta rakauya kuFangming NewM kuzoongorora iro rakadzika basa rekutonga. Mai Zhang Ning, mutevedzeri mukuru maneja weFangming NewM aive nebasa rekugamuchira. Vatungamiriri veDhipatimendi. yeEcology neZvakatipoteredza yakaenda kumusangano wekusanganisa, kudzvanya musangano uye kukuya workshop yemuti wepa-saiti kuongorora, wakabvunza nezvebasa rezuva nezuva revashandi. Mai Zhang vakaunza zvakanakira uye mashandisiro ezvakakosha zirconia zvedongo zvigadzirwa zvakasununguka zvakagadzirwa uye zvakagadzirwa neFangming NewM zvakadzama mune yemusangano imba. Mutungamiri ainyatsoziva matanho azvino ekudzivirira nharaunda akatorwa neFangming Newm, uye akarumbidza kuti Fangming NewM yakaramba ichisimbisa kuzadzikiswa kwemitemo yenyika pamwe nenhungamiro pazvinhu zvekuchengetedza nharaunda. Ivo vaitarisira kuti Fangming NewM inogona kunyatsoziva kukosha kwemitemo yenyika pamusoro pekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza mukutonga kwakadzika uye vakashingirira mune iri basa kwenguva yakareba
Setup muna Sep. 2015, Fangming NewM imwe yepamusoro-Nyowani Technology Enterprise, nehunyanzvi kugadzira iyo yakachena-kuchena uye ultra-yakakwira-temp. mhando nyowani yezvinhu nano-zvedongo zvinhu uye zvigadzirwa seyirconia yakakosha zvinhu, iyo yekugadzira kugona pagore ndeye 30000tons, uye inotungamira kambani yekugadzira iyo yakakurumidza zirconia zvedongo zvinhu uye zvigadzirwa muChina mainland.
Kubudikidza nehutongi uhwu, Fangming NewM yakanyatsoona kuti hapana magumo mukutonga kwenzvimbo. Zvinoenderana nemamiriro azvino ehutongi hwezvakatipoteredza, isu tinofanirwa kutora matanho akakosha emunyika, tichienderera mberi tichidzidza nekutora nzira dzepamusorosoro kubva kumapurovhinzi nevemakurukota hama zvikamu, vachienderera mberi vachisimbisa hutongi hwezvakatipoteredza, uye vachisimudzira zvine simba kusimudzira kwema green indasitiri.